Shiinaha Tayada webbing, Button, Quatation Bacda iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Angel Dharka Qalabka Qalabka Co., Ltd.
Shirkaddu waxay soo bandhigtay in ka badan 100 nooc oo ah qalab casri ah oo casri ah.
faahfaahinta – – ¶
Waxaan ku siin karnaa karti sare iyo xal dabacsan macaamiisha khadadka kala duwan ee adduunka oo idil Oo aad la kulanto.
Tiknoolajiyad heer sare ah
Angel waxaa ka go'an in ay dharka dharka jumlada iyo dhammaan noocyada kala duwan ee naqshadeynta qalabka, horumarka, wax soo saarka iyo iibinta.
Badeecadaha waxaa badanaa lagu iibiyaa Yurub iyo Mareykanka suuqyada iyo warshadaha dharka ajaanibta ah ee gudaha, hadda soo wareejinta bil kasta waxay gaari kartaa 3 milyan.
Badhanka badarka Crystal pear
Angel Dharka Qalabka Qalabka Co., Ltd.
Angel Garment Accessories Co., Ltd. waa soosaar xirfad leh oo goos goos ah, laba qaybood oo aan la aamusin karin; Debecsan, xarig aan kala go 'lahayn, iyo ku dhowaad kun nooc oo qalabka wax soo saarka ah soo saarista shirkadaha ganacsiga farsamada sare. Waxaa ka go'an dharka dharka jumlada iyo dhammaan noocyada qalabka naqshadeynta, horumarka, wax soo saarka iyo iibinta. Shirkadeena waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha, sida midabaynta, alaabada xargaha ee leh iska caabinta iftiinka, caabbinta heerkulka sare, iska caabbinta biyaha, iska caabbinta, ha libdhin iyo astaamaha kale, badeecada ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dharka, kabaha, koofiyadaha, boorsooyinka, alaabada carruurtu ku ciyaarto, gawaarida, farsamada gacanta, qalabka caafimaadka iyo warshadaha kale oo ah qalab caawinaad ah. Shirkaddayadu waxaa la aasaasay sanadkii 2010, waxayna ku taal magaalada wax soo saarka adduunka caanka ku ah - Dongguan. Iyada oo dadaallada wadajirka ah ee dhammaan xubnaha shirkadeena, Angel Garment Accessories ay noqotay mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dharka wanaagsan ee dal iyo dibadba.
Jacquard ka dib muuqaalka xariga seddex-geesood qurux badan, jacquard hannaan waara, weligoodna ma liicdo.Bacnd jacquard, calaamadda si muuqata u muuqata, midab dhalaalaya, darajo aad u badan, ma kordhin karto oo keliya qiimaha lagu kordhiyay alaabada, Waxay sidoo kale kor u qaadi kartaa sawirka ast...
halkan waxaa ah laba habab oo waaweyn oo lagu midabeeyo xargaha dharka. Mid waa dheehida ugu badan ee la isticmaalo (dheehida caadiga ah), taas oo inta badan lagu daaweeyo xargaha dharka lagu xaliyo xal dheeh kiimiko ah. Qaab kale ayaa ah in la isticmaalo rinji, kaas oo ka samaysan waxyaabo aad u ya...